Ukuphupha ubaleka ngaphezulu Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Indlela yelizwe emnyama apho ngesiquphe amehlo amabini amenyezelayo-ebumnyameni, amatayara akhwazayo, impembelelo enzima, kunye nokothuka kwento eyenzekileyo-ebaleka phezu kwexhama, kungasathethwa ke ngomntu-avele, yeyona nto imbi kuyo yonke loo nto Umqhubi. Njengoko imoto ikwindlela elula yokuhamba, ikwayingozi. Ayisiyiyo kuphela izilwanyana zasendle, kodwa ikwangabantu abahamba ngokugcwala mihla le. Akukho nto ifundiswayo ukuba sijonge ngononophelo ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ngaphambi kokuwela isitalato.
I-motif ibonakala kwiintetho ezininzi kunye neefilimu Uloyiko Xa umntu kufuneka emkile kwaye ngequbuliso imoto ibaleka iye ngqo kubo ngesantya esiphezulu, okanye abalinganiswa abaphambili balandelwa iminyaka ziziphumo zengozi yemoto yabo kuba kusweleke umntu. Amaxesha amaninzi ukubetha kunye nokubaleka kuyenziwa kwaye umenzi wobubi kufuneka abekwe kuqala ngamapolisa.
Ukuba umntu ubalekile ephupheni, kubaluleke kakhulu ekutolikweni kwephupha ongena phantsi kweevili. Ngaba ngumenzi wobubi okanye lixhoba lephupha? Ngaba bakhona abanye abantu ababandakanyekayo? Ngokwesiseko sale mibuzo, iimpawu zokuqala zokucaciswa kwalo mfuziselo wephupha ziyavela.
Kule mibhalo ichazayo ilandelayo, ngoku uya kufumana konke malunga neemeko zamaphupha ezinxulumene nokuqhutywa, okwenzeka rhoqo ngexesha lokulala. Ukuba awufumani nkcazo yephupha lakho apha, jonga ngaphezulu ezantsi kweli phepha ukuze ubone ukutolikwa ngokubanzi kwephupha.
1 Umqondiso wephupha "lokugqitha": awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ingozi yabantu abonzakeleyo: eyothusayo nasemaphupheni
1.2 Amaphupha amabi apho umntwana aqhutywa khona
1.2.1 Umntwana uqhutywa, liphupha eliyinyani lokwenyani
1.2.2 Imoto ibaleka phezu komntwana ephupheni.
1.2.3 Uloliwe ubaleka ngaphezulu komntwana, eyoyikeka! Uhlalutyo lwamaphupha
1.3 Kwakungokubulala ... ukuqhutywa ngabom ephupheni
1.4 Kubuhlungu kanjani: ukulahlwa kwizilwanyana kwilizwe lamaphupha
1.4.1 I-Meow! Ikati njengexhoba kwingozi yephupha
1.4.2 Inja iqhutywa ephupheni - wauwau ohluphekileyo
1.5 Izithuthi ezithoba umphuphi
1.5.1 Ingozi yemoto: ukuphupha ukudibana nemoto
1.5.2 Isilumkiso, ilori! Itrakhi eqengqelekayo njengephupha elibi
1.5.3 Baleka uloliwe ... Ingozi yephupha elibi
2 Isimboli yephupha "gqitha" - ukutolikwa ngokubanzi
3 Umqondiso wephupha "lokubaleka" - ukutolikwa kwengqondo
4 Umfuziselo wephupha "lokubaleka" - ukutolikwa kokomoya
Umqondiso wephupha "lokugqitha": awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ingozi yabantu abonzakeleyo: eyothusayo nasemaphupheni
Ukuba uphupha ukuqhuba ngaphezulu komntu, lo luphawu oluqinisekileyo lwendlela yobomi bokwenyani. Oleleyo uthathe isikhombisi ekufuneka asigcinile xa umntu ebaleka kwimeko yamaphupha akhe. Nokuba imiqobo ibonakala ngokwenyani, umntu ophuphayo uyayiqhuba kwaye uya kuphumelela. Umfanekiso wephupha "umntu ugijinyiwe" unokubonisa ukungancedi. Mhlawumbi ezinye ziphembelela umntu ekubhekiswa kuye kakhulu kubomi bokwenyani.
Amaphupha amabi apho umntwana aqhutywa khona
Umntwana uqhutywa, liphupha eliyinyani lokwenyani
Inyani yokuba ubaleke ngaphezulu komntwana ephupheni inokuba ngumnxeba wokuvuka. Ngokwenyani, ezinye iimeko zifuna ubuntununtunu kunye nononophelo. Jonga indlela umntu abaleka ngayo el mundo Iphupha elifana nephupha, kwiimeko ezininzi, luphawu olulungileyo lwesicwangciso sobomi esilandelwayo ukuza kuthi ga ngoku. Ukubaleka phezu kwabantu ngelixa belele kukhuthaza umphuphi ukuba akholelwe kwiinjongo zabo. Umntwana obalekayo ebusuku, nangona kunjalo, ulumkisa ukuba kuhlawulwe ngakumbi.
Imoto ibaleka phezu komntwana ephupheni.
Ukuphupha umntwana ebethelwe yimoto kunokuba ngamava aphupha aphazamisayo. Ingabonisa umntu ophuphayo ukuba inkululeko yakhe yokwenza into inokuthintelwa kungekudala kuba uxhomekeke kuncedo lwabanye abantu. Emva koko nangona kunjalo, kunokubakho isiqalo esitsha esihle, ke yiya kuso!
Uloliwe ubaleka ngaphezulu komntwana, eyoyikeka! Uhlalutyo lwamaphupha
Sisiganeko esibuhlungu ngokukodwa xa umntwana ethe wabethwa nguloliwe ephupheni. Nangona kunjalo, olu phawu lwephupha kufuneka luqondwe ngokufuziselayo kwaye lubonise ukuba umntu ophuphayo kungafuneka athi ndlela-ntle kwezinye zeeprojekthi zabo kuba kujike kwaba yinto engekhoyo. Nangona kunjalo, umphuphi kufuneka abone oku njengethuba lokuqalisa amava amatsha.
Kwakungokubulala ... ukuqhutywa ngabom ephupheni
"Umntu uzama ukundigijimela." Ukuba olu luvo lokubulala lwenzeka kuwe ebusuku, uya kuba ulungile xa ukhe uphumle. Ukuba kunyanzelekile, kukho iimpawu umntu alalayo angazifuniyo xa evuka. Phantse ukuqhutyelwa ephupheni isimemo sokwenza ubuhlobo kunye neendawo ezicinezelweyo kubuntu bakho ukuze ukwazi ukukhula ngokukhululekileyo. Ukuqhutywa kwimicimbi yamaphupha kuhlala kubonisa imfuno egqithisileyo kwinyani.
Kubuhlungu kanjani: ukulahlwa kwizilwanyana kwilizwe lamaphupha
I-Meow! Ikati njengexhoba kwingozi yephupha
Ikati ebalekayo njengomfanekiso ovela ephupheni imele ukuvusa umntu oleleyo. Kubomi bokwenyani, imicimbi ethile ifuna ukuba uyiqwalasele ngokupheleleyo. Ngoku kubalulekile ukuqokelela iingcinga zakho kwaye wenze ngokuzimisela. Kwinyani, ukuba uhlala unxaxha kwizicwangciso zokwenyani kwaye uphazamiseka ngokulula, oku kungakhokelela ekusileleni kweenjongo zakho. Ngokwenyani, kuhlala kuninzi ukuba ungaphazamiseki.
Inja iqhutywa ephupheni - wauwau ohluphekileyo
Ngokukodwa xa umntu oleleyo elawula imoto ngokwakhe kwaye ngaloo ndlela enzakalisa umhlobo onemilenze emine kwilizwe lamaphupha, oku kuhlala kungumqondiso woloyiko lokwenene lokulahleka. Kwimeko yephupha, ukubaleka phezu kwenja kubonisa ukungoneliseki okukhoyo ngoku. Umphuphi unokufuna ukuqinisekiswa okungakumbi ngempumelelo yakhe. Olu khangelo lokwamkelwa ngokwenyani lukwanxulumene nomsebenzi okanye inqanaba lobuhlobo.
Izithuthi ezithoba umphuphi
Ingozi yemoto: ukuphupha ukudibana nemoto
Ukuba ulixhoba lengozi yendlela xa ulele, oku kubonisa umthwalo omkhulu. Umntu ekuthethwa ngaye unokuziva onwabile yimisebenzi ayikhethayo. Ukuba umntu olele ubethwe yimoto ephupheni, oku kubonisa ukuba ufuna ukuphepha uxanduva oluvele ngelixa evukile.
Ukuba uyamazi umqhubi wesithuthi esenzakeleyo ebusuku, kungenzeka ukuba lo mntu unxulumene nemicimbi yokwenyani.
Isilumkiso, ilori! Itrakhi eqengqelekayo njengephupha elibi
Rhoqo xa uvukile, unemvakalelo yokonganyelwa ngokupheleleyo xa uphupha ukubethwa lilori. Isithuthi esikhulu sephupha sibonisa uxinzelelo olonyukayo kunye nexhala elinzima lobomi bokwenyani. Ezi ngxaki zoxinzelelo zisongela ngokuhlasela iphupha ngoku, kanye njengoko oko kuthiwa lilori kumava ephupha.
Baleka uloliwe ... Ingozi yephupha elibi
Ukuba wena, njengomntu oleleyo, ubethwe ngololiwe, olu phawu lwenzelwe ukuba luphawu lwesilumkiso. Imeko eyingozi mhlawumbi yayijongwa gwenxa iyinyani. Ukuba ngomnye umntu osweleke kuloliwe wamaphupha, iphupha elo kufuneka lilumke kwikamva elikufutshane: kunokwenzeka ukuba kubekho umntu ofuna ukwenzakalisa lo mntu kuthethwa ngaye.
Isimboli yephupha "gqitha" - ukutolikwa ngokubanzi
Amaphupha alolu phawu anokoyikisa kwaye oyike ekuqaleni. Akuqhelekanga ukuba abantu balimale ngephupha. Kodwa ngumyalezo ovela kwi-subconscious onokuchazwa kwaye unokuthetha izinto ezintle.
Ngubani obaleka isilwanyana okanye umntu ephupheni kunokwenzeka. ngqalelo kwaye kuya kufuneka uhambe ebomini ngolwazi olungakumbi. Uphawu lwephupha lunokuba ngu isilumkiso Bamele ukuba ukuphupha kuziphatha ngokungakhathali kwaye kubeka engozini ingqibelelo yakho okanye impilo.
Ukuba abanye abantu bayabandakanyeka engozini, oku kungabonisa ukuba eliphupha lelakho. ixhaswe okanye uqhutywa ukuba uthathe amanyathelo ayingozi obungekhe uwenze wedwa. Kuba ingozi ihlala ibonisa ukuvaleka, abantu ababandakanyekayo banokukuthintela ekubeni uqhubele phambili.
Ukuba iphupha elo lifunyenwe emva kokulingwa yinto ethile okanye umntu okwimeko entle, umzekelo, embindini wosapho lwamaphupha okanye emsebenzini, iphupha elo linokuchazwa ngendlela elungileyo:
Isenzo sokuqhuba sithetha, ke, ukoyisa imiqobo yangaphakathi ethintela iphupha ekufezekiseni iinjongo zalo ebomini. Ezi zihlala zoyika i utshintsho. Ngokuya ngqo kwiblade kunye nokubaleka ngaphezulu kwayo, ujongene noloyiko lwakhe ephupheni.
Ukuba ubethwe nguwe ephupheni, nokuba yimoto, uloliwe, okanye istroller, oku kubonisa Ukugqithisa phantsi. Uzifumene ukwimeko apho ungaziva ufanayo. Uloyiko loxanduva oluninzi lusemngciphekweni apha, into ayicingileyo kwaye ngoku akholelwa ukuba ayenzi bulungisa. Isiphumo kukungancedi kunye nokungakhathali.
Nabani na oqhutyelwa ephupheni, ke ngoko, kufuneka ajongane nemibuzo yento eninzi kuye ebomini, yintoni na aziva ebaleka ngayo. Amalungu osapho okanye abantu osebenza nabo banokufuna okuninzi kakhulu kuwe okanye bangavumelani neminqweno yakho. Ukuba umntu oleleyo angamazi umqhubi, luphawu olucacileyo lokuba ngubani obeka umphuphi phantsi koxinzelelo olunjalo.
Ukuba indoda iqhutywa ephupheni, oku kubonisa uloyiko lokungakhathali kakhulu ngokwesondo.
Umqondiso wephupha "lokubaleka" - ukutolikwa kwengqondo
Ukuqhutywa okanye ukugqithelwa ngaphezulu kuhlala kufuzisela ephupheni uloyiko olufihliweyo, ukuba iphupha kufuneka loyise ("libaleke") ukufikelela kwinjongo yalo, okanye ukuba ayiziva ifana, ke iyangena. Uyaziqonda ukuba akanakunceda kwaye unenceba. Ngenxa yokuba ungalwazi uloyiko lwakho, i-subconscious itsala olu phawu lomeleleyo kwaye ikwenza uyazi ukuba ujongane nayo kunye neyangaphakathi. Ukuthintela ukudlula.
Ukubaleka ngaphezulu komntu kunokufihlwa kwakhona ukuhlaselwa yalatha ephupheni. Ukuzimisela ukusebenzisa ubundlobongela kufuneka kuvavanywe ngokusondeleyo ukuze kuqhutywe ngeendlela ezinokucwangciswa ekuvuseni ubomi kwaye kungabikho zenzo zenzakalisa abanye.
Ukuba umntu othile ubaleka kuwe okanye ukukhuthaza ukuba wenze esi senzo sobundlobongela, kungcono ujonge kufutshane nendawo ekungqongileyo. Ngaba uziva unyanzelekile okanye uxhaswa ngumntu? Ngaba awunakulinga ukunika indawo engaphezulu kwiimfuno zakho kwaye ubakhusele kwabanye?
Ukubaleka ngaphezulu kwesimboli sokulala kunokubonisa ukungalingani isini bonisa. Eyam Shoot iye yazimela kwaye ayikho kulawulo lwakho. Apha kubalulekile ukumodareyitha kancinci ngokwesondo kunye nokufumana kwakhona ulawulo kwinto yemvelo.
Umfuziselo wephupha "lokubaleka" - ukutolikwa kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, ingozi ayibikho ngaphezu kokuvela nje. Isimboli yephupha "lokugqitha" kuthetha, ke ngoko, ukungenelela kwelinye amandla omoya.